विषादी प्रयोग गरिएका फलफूल खाँदा क्यान्सर सम्मको जोखिम | गणतन्त्र राष्ट्रिय दैनिक
विषादी प्रयोग गरिएका फलफूल खाँदा क्यान्सर सम्मको जोखिम
| 202 Views | Published Date : 22nd May 2018 |
यमकला भुसाल तुलसीपुर, जेठ । बँगैचामा भर्खरै मात्रै आपँ बतिला लाग्दै गरेको अवस्थामा छ । आँप पाक्न अझै कम्तिमा पनि एक डेढ महिना जति लाग्छ । तर छिमेकी देश भारतबाट भने बैशाख महिनामै नेपाली बजारमा पाकेको आँप आउन थालेको हो । पाकेका आँप धमाधम दाङका बजारमा विक्रि वितरण हुँदै आएको छ ।
चैत महिनाको अन्तिमदेखि नै दाङ सहित तराईका बजारमा भारतीय आँप भित्रन सुरु भएको हो । सिमावर्ती बजारसगै दाङका सहर तथा ग्रामिण क्षेत्रमा समेत भारतीय आँपको छ्याप छ्याप्ती विक्रि वितरण हुँदै आएको छ । आँप प्राकृतिक रुपमा पाक्नु भन्दा पहिले नै कडा खालको विषादीको प्रयोग गरि आँप पकाएर बजारमा विक्रि वितरण भइरहेको भएपनि त्यसको कहि कतैवाट नियमन भने भइरहेको छैन ।
आँप व्यापारीले भारतको बिहार,कलकत्ता,उत्तरप्रदेश र पश्चिम बगांलबाट काँचो आँप आयात गरि त्यो पकाउन स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक मानिने विषादी प्रयोग गर्ने गर्छन । त्यस्ता आँपमा औषधी तथा केमिकल राखेर पकाउने गरिने हुँदा त्यो हेर्दै अस्वाभाविक रगंका देखिन्छन । तरपनि फलफूल व्यापारीहरु भने भारतबाटै पाकेका आँप ल्याउने गरेको दाबी गर्ने गर्छन । दाङ्को तुलसीपुरस्थित जहिर फ्रुट केन्द्रका बिनोद कुमार नेपालीले हाल आफुले भारतको कलकत्ताबाट ल्याइएको ‘बदाम’ जातको आँप बिक्री गरिरहेको बताए ।
‘ यो आँप भारतको कलकत्तमबाट ल्याइएको हो र नेपालमा भन्दा त्यहाँ गर्मी भएकाले छिटो पाक्ने गर्छ, विषादी प्रयोग गरिएको हैन ।’ उनले भने । तर यो सिजनमा आँप बजारमा भित्र्याउन सकेमा मनग्य फाईदा हुने हुँदा व्यापारीले पैंशाकै लागि सर्वसाधारणको जनश्वास्थ्यको समेत व्यवास्ता गर्दै आएका छन् । हाल दाङको बजारमा ा दसहरी र बदाम आँपको मुल्य प्रतिकेजि डेढसयदेखि ढाई सय रुपंैया सम्ममा विक्रि हुने गरेको व्यापारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
विषादीको प्रयोग बढी भएको फलफूल खाँदा क्यान्सर सम्म हुनसक्छ –डा. सिंह
राप्ती अञ्चल अस्पताल तुलसीपुरका निमित्त मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. बिनोद सिहंले कडा खालका विषादी प्रयोग गरेर पकाएका फलफूल खाँदा कुनैपनि व्यक्तिको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने सक्ने बताएका छन् । प्राकृतिक रुपमा कुनैपनि फलफूल पाक्ने भन्दा पहिले नै मुनाफा मात्रै खोज्ने व्यापारीहरुले काँचैमा टिपेर कडा विषादी प्रयोग गर्ने हुँदा त्यो खाँदा जोखिम हुने डा. सिंहले बताए ।
त्यसैले सकेसम्म कसैलेपनि विषादी प्रयोग गरिएका आँप तथा अन्य फलफूलहरु नखाउन उनको सुझाव छ । ‘सकभर विषादी हालेका फलफूल नखानुहोस, यदि खानु नै छ भनेपनि कम्तिमा केहि समय फ्रिजमा राखेर वा तातो पानीले धोएर मात्र खाने गर्नुपर्छ ।’ डा. सिंहले सुझाए । उनले कडा खालको विषादी प्रयोग गरिएको फलफूल खाँदा मानिसमा छालाको रोग,पेट सम्वन्धी रोग वा पेट दुख्ने, फुल्लिने, वान्ता हुनेदेखि लिएर क्यान्सर सम्मको खतरा रहने बताए ।
नियमनकारी निकाए मौन
चार्डवाडको समयमा मात्रै बजार अनुगमनको नाटक गर्ने विभिन्न खाद्य अधिकारवादी संघ संस्थाहरु बजारमा विषादी हालेका आँप तथा फलफूल छ्याप छ्याप्ती विक्रि वितरण हुँदा समेत मौन बस्ने गरेका छन् । अधिकार संपन्न मानिने स्थानीय निकाए समेत यो सवालमा मौन छ । चाहेमा स्थानीय सरकारले त्यसमा खवरदारी गर्न सक्छ । नियन्त्रण गर्न सक्छ । तर स्थानीय सरकार र नियमनकारी निकाए समेत वेखवर जस्तै बन्दा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यको लागि घातक मानिने विषादी हालिएका फलफूलको बजारमा खुल्लम खुल्ला किनवेच भइरहेको छ ।
दाङका तुलसीपुर,घोराही,लमही,भालुवाङ लगाएतका बजारहरुमा खुले आम सिजन भन्दा पहिले नै विषादी हालेर पकाईका आँप विक्रि विरतण हुँदा समेत त्यसमा कसैले चासो दिएका छैनन् ।